Umhlahlandlela Wokugcina Wama-Metrics We-Pinterest | Martech Zone
Sithola umfudlana omuhle wethrafikhi kusuka ePinterest. Kuyavumelana kahle inqobo nje uma ukuthumela kwethu kuPinterest kungaguquguquki. Kusizile futhi lapho sifaka i- Inkinobho ye-Pinterest Pin It For Images - uzoyibona uma uqhafaza isithombe ngezansi. Baningi kakhulu abanye abantu ababelana nge-infographics yethu.
Our Ibhodi lezokumaketha le-Marketing Cishe inabalandeli be-1,000 futhi ngokwethembeka senza okuncane kakhulu ngaphandle kokuthumela ama-infographics ethu lapho! Amamethrikhi esivame ukugxila kuwo konke kubangelwa ngqo ukuthi zingaki izivakashi esizithola kusayithi lethu zivela ePinterest nokuthi ziguqula kanjani noma zihlanganyela kanjani nabaxhasi bethu.
Amabhizinisi asebenzisa ngempumelelo iPinterest - vele uhlole amaklayenti ethu, Uhlu luka-Angie, namabhodi abo. Benza umsebenzi omangalisayo wokugcina amabhodi ayishumi nambili anokuqukethwe okungakholeki. Uma usebenzisa iPinterest ngemizamo yakho yokumaketha eku-inthanethi, kunamamethrikhi ambalwa okufanele uhlale wazi ngawo. Okuhleliwe Komphakathi hlanganisa le infographic nge uhlu oluphelele lwamamethrikhi wePinterest ungaqapha nokuthi imizamo yakho isebenza kahle kangakanani.
Tags: ukuchofozaimibonoabalandeliOkuvelileukuxhumanaukuthandwaizikhonkwanePinterestUkumaketha kwePinterestpinterest metricsukulandelwa kwe-pinterestfinyelelarepinsvelocity
I-imeyili, Ufuna Ukufa noma Uyaphila
IMixpanel: Izibalo Zokwezifiso, Eziqhutshwa Umcimbi